Eczema amin'ny ankizy | Saripika sary maimaim-poana ho an'ny download
Ny antony mahatonga ny dermatika atopika
Fanafody mahasosotra ho an'ny dermatitis atopika
Manjavozavo izany, ry scratch. Miverimberina indray izany, mbola manalasala bebe kokoa ianao. Mandra-pahatongan'ny farany, ny zava-drehetra dia malemy sy ra. Ny zavatra sarotra ho an'ny olon-dehibe, dia saika tsy azo tanterahana amin'ny ankizy: atsaharo ny fihenjanana rehefa mampihetsi-po lalina ao amin'ny dsmatitis atopika.
Fa inona no atao hoe eczema atopika?
Manodidina ny 15% ny ankizy rehetra voan'ny aretina, matetika ny olon-dehibe dia tsy dia mahazatra loatra. Ao amin'ny dentsy atopika - izay antsoina koa hoe atopika eczema - dia mamolavola akondro, miaraka amin'ny hoditra maina izay manjavozavo mafy.
Ahoana no fomba itazonana ny eczema atopika amin'ny ankizy
Na misy aretina iray, dia azo faritana amin'ny alalan'ny hoditra. Raha faritana farafaharatsiny ny fepetra 3 sy ny fepetra madinika 3, dia azo antoka tsara ny aretina iray. Mazava ho azy, na ahoana na ahoana, ny torohevitry ny mpitsabo iray dia tokony horaisina!
Famaritana mitovy (kofehy, lohalika, sandry, kibo)
Fianakaviana atopika (Asthma, tsy fahampian-tsakafo, dératitis atopika)
Ny fihetsiky ny hoditra fotsy fa tsy ny fihetsiky ny hoditra mena rehefa avy nokapohina
Mafana fo manodidina ny vava
Mitefoka amin'ny hatsembohana
Tsy mety ny akanjo volon'ondry
Dermatitis manodidina ny tendrony manodidina
Ny iray dia te-handinika amin'izao fotoana izao momba ny aretina rehetra eto amin'ity tontolo ity - ambonin'izany rehetra izany aretina malaza izany - tanteraka mba hohazavaina. Indrisy fa ny fijalian'ny olona maro dia tsy izany. Tsy toy ny zava-manan'aina isan-karazany amin'ny volo, izay ahafahan'ny olona miteny "Ny zanakao dia mahazatra amin'ny soavaly"Ny antony dia tokony ho hita mazàna.
Ny iray dia miresaka momba ny fanakanana sy ny fiantraikany amin'ny toe-javatra, izay mety hahatonga ny marary amin'ny marary. Mba hanasitranana ilay aretina, tsy manampy amin'ny fanalefahana ny soritr'aretina izy io, fa ny antony voalohany indrindra dia tsy maintsy atao ny antony.
Ary ny lisitr'ireo fepetra azo atao dia lava sy sarotra:
Adin-tsaina na adin-tsaina ara-tsaina eo amin'ny vatana (toy ny ketraka)
Ny tsy fahampian-tsakafo amin'ny endriny rehetra (ohatra ny volon'ny biby, ny vovobony, ny vovoka ao an-trano na ny alergya)
ny toetrandro (toy ny hatsiaka na haintany mahery vaika)
Fiantraikan'ny tontolo iainana toy ny fivoahana gaza
Diso fanasana ny hoditra
Hery fiantraikan'ny hormona toy ny fitondrana vohoka
Aretina amin'ny tsinaina
Hitanareo amin'ny fototr'ireo ohatra vitsivitsy: misy ny antony maromaro. Ny fanampiana eto dia ny "aretina DiaryTo lead. Soraty amin'ny fomba maoderina izay nataonao, nihinana na nahatsiaro nandritra ny andro.
Fanamarihana kely: Ny "diary marary" dia mety ho tena manampy koa amin'ny aretina hafa toy ny akne. Noho izany, azo atao ny mahita ny antony eto. Ohatra iray mikasika ny tena zava-nitranga: Andeha isika hiantso ny olona Mario. Tsy nijaly mihitsy i Mario, na tampoka teo izy ireo. Ary tsy nandeha izy ireo. Na inona na inona dikany, i Mario dia efa nanandrana, na ny tranon-jaza raibeny, ny vokatra iombonana avy amin'ny fivarotam-panafody na ny vola manokana avy amin'ny pharmacy, na inona na inona nanampy.
Nanomboka nanatontosa diary i Mario tamin'ny fotoana iray, ny zavatra nihinany tamin'ny fotoana inona, inona ny asa aman-draharahany niarahany ary sy. Tao amin'ny fanadihadiana taty aoriana dia hitany fa nandray mofo sandwich avy amina mpanao mofo vaovao izy nandritra ny volana maromaro. Farany, i Mario dia nanalavitra ilay mpanao mofo tamin'ny fotoam-pitsapana nandritra ny herinandro 2 ... ary inona no vokany? Raha ny marina dia niverin-dalana ireo pimples mandra-pahatonga azy ireo tanteraka tanteraka. Ny mpanao mofo dia tsy maintsy nampiasa zava-manitra sasany fa ny vatan'i Mario dia tsy mahazatra, ary vokatr'izany, ny akne niorina.
Araka ny efa voalaza, ny dingana voalohany dia ny hanafoanana ny antony mba hiadiana amin'ny aretina. Matetika ny ankizy marary dia malahelo be indrindra, indrindra raha ny zanany manokana izany ary mikiakiaka sy mibontsina amin'ny jihany. Mba hamafisatra izany farafahakeliny, nametraka toro-hevitra 5 isika izay tokony hanamaivana ny fofona, ary koa ny fanosehana:
Araka ny tsy fahampian'ny feo: aza mikitikitika! Na dia efa sarotra ho an'ny olon-dehibe aza izany ary mety ho tsy ho vitan'ny ankizy mihitsy, dia manamaivana ny fanaintainana mandritra ny fotoana fohy ny krizy, saingy avy eo dia mitondra fiantraikany goavana amin'ny boomerang. Zava-miafina tena masiaka!
Fanamarihana kely: Mba hisorohana ny fanosehana tsy ilaina, ohatra, amin'ny alina rehefa matory, dia manampy ny manapaka ny felan-tongotra fohy sy manao ny fonon-tanety.
Tavoahangy mainty hoditra
Manaova akanjo mainty mainty ary atsipazo eny amin'ny faritra voakasik'izany. Amin'ny alàlan'ny tanim-bary dia mampivelatra ny lamosin'ny fiarovana izay mahatonga ny hoditra very tsy fahampian-tsakafo (tsarovy, hoditra hoditra!) Ary ny tsiranoka dia miverina araka izany.
Fanaovana firaisana ara-dalàna
Ary tsara indrindra amin'ny menaka voajanahary na menaka. Ohatra, ny menaka arhan Maraokana dia tena mifanaraka tsara eto. Ny menaka Argan dia menaka voajanahary voajanahary manana alika voajanahary avy amin'ny voajanahary voajanahary ary vitamin E, izay manamaivana ny fofona ary manome ny hoditra manan-danja. Fampahalalana momba ny argan oil ...
Araka izay efa nosoratana teo aloha, ny adin-tsaina dia mety ho antony mety. Amin'io tranga io, ny fampihetseham-panafahana dia afaka manampy amin'ny fitomboan'ny fahatsaranao manokana, ary vokatr'izany dia manamaivana ny fantsona.
Mafana tsara & maina
Rehefa manasa fanasana dia aza manodina ny rano mafana, toy ny manala ny hoditra. Avy eo dia maina ny hoditra fa tsy mokon-koditra, dab miaraka amin'ny menaka, mba hisorohana ny tsy ilana ny hoditra. Zava-dehibe eto aorian 'ny hoditra mba hanasitranana indray sy ny crème.
Zarao amin'ny ankizy
Amboary ny lohalika miaraka amin'ny ankizy